E-News Nepali || Fast and Accuracy » इटालीलाई पनि उछिनेर अमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको निधन भएपछि, ट्रंपले अहिलेसम्मकै ठूलो निर्णय लिंदै !
इटालीलाई पनि उछिनेर अमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको निधन भएपछि, ट्रंपले अहिलेसम्मकै ठूलो निर्णय लिंदै !
विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट निधन हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा भएको छ ।
शनिबार सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको निधन भएको छ भने सबैभन्दा धेरै मानिसको निधन हुने सहरमा न्युयोर्क परेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा २० हजार ५८० जनाको निधन भएको छ । अमेरिकामा संक्र मितको संख्या पनि ठूलो छ । अहिलेसम्म संक्र मितको संख्या अमेरिकामा पाँच लाख ५३ हजार ११५ पुगेको छ ।
तीमध्ये झण्डै दुई लाख जना न्युयोर्कका रहेका छन् । तर पछिल्लो समय भने न्युयोर्कमा संक्र मितको संख्यामा कमी आएको बताइएको छ ।
संक्र मित हुने र निधन हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि देशका धेरै राज्यहरुमा अहिले संकटकालको घोषणा गरिएको छ । लकडाउन नलगाउने घोषणा गर्दै आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक दूरी कायम गर्ने सुझावहरू हाललाई अप्रिल ३० सम्म तोक्नु भएको छ ।
संक्र मितको संख्यामा भने स्पेन दोस्रो अग्रस्थानमा रहेको छ । इटलीमा संक्र मितको संख्या एक लाख ५२ हजार २७१ रहेको बेलामा स्पेनमा भने एक लाख ६३ हजार २७ रहेको छ । स्पेनमा निधन हुनेको संख्या १६ हजार ६०६ रहेकाले कोरोनाका कारण मानवीय क्षती धेरे बेहोर्नेमा स्पेन तेस्रोमा रहेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म धेरै नागरिक संक्र मित भएका देशहरु मध्येमा फ्रान्स चौथोमा, जर्मनी पाँचौमा, चीन छैठौँमा, बेलायत सातौमा, इरान आठौमा, टर्की नवौँमा र बेल्जीयम दशौँमा रहेको छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार संक्र मितको संख्या फ्रान्समा एक लाख २९ हजार ६५४, जर्मनीमा एक लाख २५ हजार ४५२, चीनमा ८२ हजार ५२, बेलायतमा ७८ हजार ९९१, इरानमा ७० हजार २९, टर्कीमा ५२ हजार १६७ र बेल्जीयममा २८ हजार १८ रहेको छ ।
त्यसैगरी निधन हुनेको संख्या फ्रान्समा १३ हजार ८३२, जर्मनमा दुई हजार ८७१, चीनमा तीन हजार ३३९, बेलायतमा नौ हजार ८७५, इरानमा चार हजार ३५७, टर्कीमा एक हजार १०१ र बेल्जीयममा तीन हजार ३४६ रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यो समाचार लेख्दासम्म विश्वभरी १७ लाख ८१ हजार ४६९ जना संक्र मित भएका छन् भने दश लाख आठ हजार ८८३ जनाको निधन भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्र मण अहिलेसम्म विश्वका २१० देशमा पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति ३० चैत्र २०७६, आईतवार १०:३४